Sida loo kala cadeeyo taariikhda Internet joogto ah la mid click
> Resource > masixi > Sida loo Cad Internet History joogto ah ula 1 Click
Privacy waa mid aad muhiim u ah qof walba, waana wax aad looga xumaado, haddii gaarka ah xaday ka baxo ama qof xaday, xataa ku kala bixiyey. Laakiin miyaad taqaan? Mararka gaarka ah ay daataan keligaa, oo kaliya ma idin ​​garan maayo. Sidee? Iyada oo taariikhda internet-ka. Dhab ahaantii mar kasta oo aad isticmaalayso kombiyuutarka, biraawsarkaaga si toos ah u qabaneysa macluumaadka aad isticmaalayso sida taariikh ah, sida khasnado Internet, cookies, bogaga internetka, liiska duuban, iyo xitaa Magaca adeegsadaha iyo sirta ah. Marka aad soo booqato waqtiga soo socda, browser aad ka jawaabi doonaa log taariikhda in waqti yar. Sidaas waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad in ay nadiifiso taariikhda Internet sababo gaarka ah.
Habka ugu fudud in ay tirtirto taariikhda Internet leh oo keliya 1 click
No arrinta waa kayd ah Internet, cookies, degsado liiska, oo waxba ma ahan aad isticmaalayso Internet Explorer ama browser Firefox ah, oo dhan Guda taariikhda si buuxda oo joogto ah lagu waayay karo. Waxa aad u baahan tahay nadiifiye taariikhda . Halkan aynu qaadan Wondershare 1-Click PC Care sida tusaale.
Nadiifiye taariikhda Tani waxay si toos ah iskaan doonaa si ay u aqoonsadaan dhibaatooyinka jira ee aad kombuutarka, iyo dhalin wararka la xiriira shay kasta. On warbixinta waxaad ka heli kartaa hubinta liiska gaarka ah shakhsi sida sawirka hoos ku qoran:
Ayaa raad ku saabsan hawlaha aad la Internet Explorer ah, habka iyo codsiyada ku qoran yihiin faahfaahinta. Oo waxaa jira talooyin la xidhiidha, waayo, waxaad iyaga ku sameeyo oo la. Waxa ugu fiican waa in aadan, u baahan tahay in aad u kala cadeeyo mid mid ka Internet Explorer ama Firefox browser, kaliya hal click ah "hagaajin NOW" button halkii. Markaas oo dhan diiwaanka taariikhda si buuxda tirtiray labada Explorer aad Internet iyo Firefox browser. Guuleysatey your computer iyo furi biraawsarkaaga. Ma jiro qof hadda ka heli kartaa macluumaad gaarka kuu ah.
Dabcan, aad ma aha oo kaliya la tirtiro taariikhda Internet arrintan click. Ka dib markii howleheedii your computer, waxaad ka heli doontaa your computer waddaa si ka dhaqso badan ka hor. Waa maxay sababta? 1-Click PC Care ayaa iskaan oo go'an dhibaatooyin kale oo ka soo baxaysa on your computer at Dhanka kale, sida ilaalinta diiwaanka hortagga diiwaanka aad ka fogaadaan weerarada arxandarada ah, weeraro qoriga iyo jeermiska fayraska, si kor loogu qaado wax qabadka PC, xasiloonida iyo ammaanka. Kaliya hal click, waxaad samayn kartaa sida khabiir computer ah in ay dib ugu laaban your computer in xaaladda asalka ah.
Ownload Free Wondershare 1-Click PC Care